Silsiladda deelleyda Qarniga 21-aad maansadii Dayax #3 | KEYDMEDIA ONLINE
Silsiladda deelleyda Qarniga 21-aad maansadii Dayax #3
Maansadan waxaan curiyay 07 Desember 2009-kii, ka dib markii abwaan Bashiir M. Xersi uu furey diiwaanka cusub ee deellayda qarniga 21aad. Sida aan ognahay waxaa hore u baxday silsilad deellay ah, oo ay wadaagaayeen abwaaniin geyiga Soomaaliyeed caan ka ahaa.
Bal Maanta da’yarta cusub iyo diiwaanka qarniga ee deellayda ayaan doonayaa inaan ka qaybqaato intii kaarankayga ah.
Waxaan maansadan u bixiyay Dayax, iyada oo maansooyinkii hore u baxay ay ahaayeen Dareen iyo Dulmigii Shaamoow.
Abwaanada oo dhamaantood dareenkooda kaga hadlay dhibaatada iyo muragada dalka ka taagan, gaar ahaan koonfurta soomaliya iyo Bartamaha, ayaan maansadan Dayax waxaan doonayaa inaan isku dayo inaan sida Dayaxa u cadeeyo danbiyada, iyada oo dawadooda laga doonayo dhammaan abwaanada Soomaaliyeed, maadaama suugaantu tahay codka Soomaalidu wax isugu sheegto, diiwaankan cusub waa u furan yahay gebi ahaan abwaaniinta Soomaaliyeed, maansadii Dayax iyo bogasho wacan.
Doodaha murtida iyo
Suugaanta doorka ah
Dirirkeeda curin jiray
Dayax mudhay sidii
Xidigaha dusheena ah
Aan daliilsho maantoo
Dadkana u cadeeyee
Damiirkiina ii hura.
Iyo deexashada gabay
Adigaa dabkeed shiday
Hadalkii dabkoo kale
Kala saaray dawgiyo
Danniga iyo xumaatada
Dhabtii waan ku diirsaday
Bal aan soo daliilshoo
Dusha hara digeediyo
Didibkii ku yaal Mudug
Dar Allee Jubboo idil
Ama degeladii Gedo
Dhulkii daawashada iyo
Dalxiiskaba lahaa iyo
Dalmar baa yaqaanee
Doobiyada ku yaal Sool
Ama darinta Caynaba
Dadka dega Diraacoow
Waa duriyad qudhaato
Waa dad wada walaaloo
Dusha sariyo midabkiyo
Diirkaba isaga ege
Dubaaqa iyo hadalkiyo
Diintuna mid weeyaan
Waxse kala dilaayoo
Midba dayr ku furay
Kala daadshay ehelkii
Dakhli weyn ku qaatoo
dulmi iyo xasaradiyo
Kala diray dhamaantood
Yaanan dawga jiidhine
Aan hoos u soo dego.
Dadku ay u doorteen
Danbi waxii la galay iyo
Ee lays dakhaakhulay
Dibadday ka joogeen
Shinbiriba hal doorbay
Dab qaaday yidhaahdaan
Dusha holacii koobaad
Halkii ay ka duushiyo
Buulkeeday daf siiso
Danbaskii ku gubataye
Iyana doorkii weeyaan.
Dadka wada shisheeyaha
Dalka gubaya maantana
Darna carab xageediyo
Diinaar rag haystaa
Soo diree ogsoonoow
Dulligaa na haystee
Soo diree ogsoonoow.
Nin waliba dantiisiyo
Dalkeena u gubayaa
Illeen doqoni abidkeed
Dadka kii u xiga bay
Doox uun tidhaahdaa
Xaqa maba dareensana
Dabka ay shidaaniyo
Daartay ku dumiyaan
Dariiqii ay gooyaan
Inuu yahay dalkoodii
Ama dumarka qaxayaa
Inuu yahay dadkoodii
Maba oga Diraacoow.
Dan waxay u haystaan
Intay dunida joogaan
Dadkeenana u madhiyeen
Dalqadaa waxii gala
Ee ay dam siiyaan
Doollar loo xisaabshoo
Dayn iyo amaah dhala
Waa danayste iyo tuug
Danbiile iyo xaalkii
In dagaalku cudur yahay
Dagu dilo halyeeygiyo
Dadku way ujeedaan
Kama daalin weliyoo
Duul u ciil qabaa jira
Ilaa ay dareemaan
Dabka lagu xanuunsado
Ama uu dalluun galo
Lagu dilo naftiisaba
Dadku way ku jirayaan.
Dadku waa xil jecelyahay
Raggii doorka manta ah
Haba ugu darnaadee
Danbi iyo dhibaatiyo
Dagaal sii kordhaayiyo
Weli daacadnima iyo
Dowladnimo kumay dhalin
Hadaanay diintu diidayn
Taas nooga sii digin
Duubkaan ku xidhi laa
Dumar baan ka dhigi laa
Habaarkii darnaa iyo
Dowladii la ridayee
Tan danbaysa khayriyo
Daa’imoow ka yeel samo
Dadku aanay odhanbaa
Inaan dowga seegnoo
Duuflaalku nagu dhaco
Dadyahoow noo horseede
Dib u laabta idilkiin
Ruuxaan dantaa wadin
Dagaal ooge kuu daran
Iska diida weligiin
Kii daacadnimo iyo
Dadka wada sinaantood
Isku duubni ugu taga
Dowlad iyo wanaaggiyo
Danta guudba way iman.
Dunidoo la meeriyo
Diraacoow waxaa falay
Doorka kale ciyaareen
Inaad Adigu duushoo
Dekadaha u xaadhoo
Da’ yartoo qadaantoo
Digtoorkii adeega ah
Dumarkoo qabbaan ahi
Dan kaleeto weeyaan
Oo doqoni moogtahay
Daayinowse naga bixi.
Waa kuwaa danseego
Dugsi aadi maayaan
Darbi jiifyo weeyaan.
Danbiilay u xidhan yihiin
Kuwa diinta kaba baxe
Dahab ay ka buuxsheen
Sidii dumarkii oo kale
Darna waa dhamaadeen
Intay dibad u dhoofiyo
dal kaleeto aadiyo
Laashka iyo doomaha
Orodka aan la daalayn
Danbiyadan la galayaa
Duruus iyo wanaaggiyo
Dar Ilaahay maahiyo
Diintoo la fidiyee
Diinaar nin raba iyo
Doollar ma helayaa?
Ayaa loo dan leeyaahay
Imisaa ku dubuq yidhi
Imisaa daryeel xumo
Dawo li’i dhamaadoo
Uu dugaaggo qaybsaday
Danbigaa waxaa iska leh
Kuwa dirirta wada iyo
Kuwii dumiyay daarihii
Dadkani uu ku noolaa
Dushooday ku qorantahay
Daa’in waa ujeedaa
Daynkaasna way gudi.
Dhirta daadsan dunidani
Dawo iyo manfaca iyo
Damal iyo hadh weeyaan
Dadka siiyay weeyaan
Ku dalaysan samadaa
Daa’in amar ku siiyaa
Inay roob da’daayoo
Dabadeed dhulkoo dhami
Uu ku doogsadaayoo
Dhirta dahabka mooddiyo
Dacal iyo ilaa dacal
Daa’in uu ka buuxshaa.
Dalagyada la cunayiyo
Duunyada la foofsado
Dhirta waa daraadeed
Doorka nolosha weeyaan
Aqal lagu dakeeyiyo
Daar lagu nastaa iyo
Dadku nabad ku joogaan
Daliil weeye Eebahay
Ruuxii damiir liyo
Durba uu xasuustee
Dabka kaa ku shidayaa
Shilimada ku doonaa
Damiin weeye weligiis
Aan diinta Eebiyo
Midna dooc ka garanayn.
Ila durugtay heestuye
Aan dabar ku jiidoo
Doc kalena ka fiirshee
Dunidaba u sheegee
Dalkani dowladnimo iyo
Maamul daacadnimo wada
Dadkoo wada muwaadina
Danta guudna wada jira
Dib ma loo arkayaaa?
Mise dacarta maantiyo
Ilaa dunida laga rogo
Daa’inkeen ku jiraynee?
Dariiqee baa qarankii
Dumay lagu helayaa?